Umthandazo onamandla ku-Oxalá ngothando lokwenene ebomini bakho! ?
Umthandazo onamandla ku-Oxalá, ukulinganisela kunye noxolo zezona zicelo ziqhelekileyo zokwenza i-Oxalá. Emva kwayo yonke loo nto, abantu banxulumana ne-Orixá ngokuvumelanayo noYesu Krestu, bekholelwa ukuba ayijongani nemicimbi yentliziyo. Nangona kunjalo, inokuba namandla kwaye ibe ngumlingani olungileyo xa sifuna uthando. Yazi ngoku i Ndithandaza ku-Oxalá uthando, kwaye ufumanise ukuba ungaphumelela njani lo mnqweno ufuna kangaka.
1 Umthandazo onamandla ku-Oxalá
1.1 Izizathu ezi-5 zokuthandazela uthando luka-Oxalá
1.2 Umthandazo ku-Oxalá wothando
1.3 Umthandazo ku-Oxalá ukuze uthando lwenkanuko luzaliseke
Umthandazo onamandla ku-Oxalá
Izizathu ezi-5 zokuthandazela uthando luka-Oxalá
EBrazil, u-Oxalá unokumelwa njengo-Oxaguiã, ubuntu bakhe obuncinci, okanye u-Oxalufã, ubuntu bakhe obudala. Kukho umahluko wobushushu phakathi kwabo, ngaphandle kwamathandabuzo. Kodwa ngokunxulumene nothando, ezi "ntlobo" zimbini zinempawu ezibalaseleyo kwaye zezona kufanele ukuba sizonwabele.
Mna no-Oxalá, asithethi nganto ngalo thando! Sithetha ngaloluthando lukanaphakade. Sithetha malunga nothando oluvelisa umona kunye nokuba yinto; kodwa kwanothando esilwenzileyo, sihambisa iintaba ukuba siziphucule njengabantu. Kwaye ngubani ongafuni uthando olunje?
Nge-Oxalá, sithetha ngabantu abafuna ukufumana uthando lwenene nabafuna ukutyala imali kubudlelwane bobomi bonke. I-Oxalá yeyona orisha ilungele oku. Abantwana baka-Oxalá, nangona baneentloni, banikezela ngomzimba kunye nomphefumlo xa bedibana nomntu oduma rhoqo.
Njengoko i-Oxalá iyi-Orisha yokugqibeleleyo, ilungele ngokufanelekileyo abo bafuna umphefumlo. Olu hlobo lomphefumlo silubiza ngokuba ngumphefumlo womphefumlo kuba lityhutyha ngamawele. Kwaye i-Oxalá iyagungqisa kwisantya sokugqibelela.
Xa sithandazela uthando luka-Oxalá, sisoloko sithetha malunga nothando lwendalo iphela. Kwaye oku kubaluleke kakhulu kuhambo lwethu lokomoya!
Umthandazo oya ku-Oxalá wothando uhlala ungumthandazo ocela uthando oluza ngokuzola kunye nokwamkelwa. Kwaye sidiniwe luthando ngokulwa, akunjalo?
Uyithandile Ke masifunde onamandla Ndithandaza ku-Oxalá uthando Kuyinyani ukungena kubomi bethu ngawo onke amandla namandla!
Umthandazo ku-Oxalá wothando
NgoLwesihlanu, khanyisa ikhandlela emhlophe kwindawo ephezulu oyithandayo. Qala ngokubingelela kwaye uthandaze ku-Oxalá uthando kwaye uqhubeke:
“Molo bantwana! Gcina i-Oxalá, eyona ye-Orixás,
Amandla kaThixo othando, ukungakhathali kunye nothando!
Nkosi yamhlophe, uxolo nokukhanya,
Thatha uloyiko ebomini bam ukuze uzive, uphile kwaye ubone
Amandla uthando lokwenene luvula iindlela zam
Ukukhanyisa ikhaya lam, ukuzisa okuLungileyo ebomini bam!
Bawo Oxalá, wena olungileyo kaThixo,
Ndinike inkampani yabantu emhlabeni
Ke ndiyakwazi ukubonisa amandla othando lwakho
Yonke imihla yobomi bam.
Molo babysitter! Gcina ukukhanya kwakho kunye nenceba yakho!
Umthandazo ku-Oxalá ukuze uthando lwenkanuko luzaliseke
NgoLwesihlanu, nikezela ngeentyatyambo ezimhlophe ukuba uthandaze lo mthandazo, ngokukhethekileyo ngentsimbi yesi-6 kusasa, olucango olunamandla lokuthandaza. Ndithandaza i-oxalá uthando:
I-Oxalá, ukuKhanya kobuNgcwele boThixo,
Ndicela ukuba ihlazo lothando lwakho olunyulu
Sasaza namhlanje kwaye ngoku ebomini bam bonke.
Ndiya kubonakalisa ubuhle bakho negama lakho
Ukudibana nobomi bam kubomi bomphefumlo wam
Ngeentsikelelo zakho kunye nokukhusela kwakho okungapheliyo eMhlabeni.
Wanga i-oda yam ingamkelwa njengentyatyambo emhlophe,
Uphawu lomnqweno wam woxolo nothando,
Okwangoku, ngonaphakade kanaphakade.
Ke makube njalo kwaye kuyakuba njalo! Gcina amandla e-Oxalá! Whoa Babysitter!
Ngoku ukuba ufundile ukwenza Ndithandaza ku-Oxalá uthandoBona kwakhona: